Zụọ ahịa na Milan, Italy is our Fashion pick for Best Cities in Europe for Shopping
Milan-agụ n'etiti ndị kasị mma obodo na Europe maka shopping ekele a na-atụle isi obodo nke ejiji. Otú ọ dị, Milan bụghị naanị banyere The Fashion na elu-n'okporo ámá ejiji na Duomo ebe. E nwere ọtụtụ ebe ndị ọzọ inyocha, si artsy ụlọ ahịa nke Brera district na funky mmetụta na Navigli ebe. Milan bụ n'ezie a shopper si paradise. Ọ bụrụ na ị na-kpaliri mmasị ya, ị nwere ike ịga njem Milan mfe site okporo ígwè site Rome, Venice, nakwa dị ka obodo ndị ọzọ na Europe.
Ndị ọzọ ọwọrọiso hotspots agụnye Bahnhofstrasse, Europaallee na ebe gburugburu Langstrasse, karịsịa ma ọ bụrụ na ị chọrọ lelee Swiss na obodo mepere emepe imewe. Inweta n'ebe ụgbọ okporo ígwè na-adị mfe site na Berlin, Munich, Vienna, na ndị ọzọ na European obodo.
Otu n'ime ihe ndị na-eme ka Antwerp pụrụ iche shopping-maara ihe bụ ya ụwa na-ama diamond district. Otú ọ dị, Antwerp doesn’t lack designer and Devid agụghị ndị gbara ụlọ ahịa, ochie na-echekwa ma ọ bụ na-ekwo ekwo ahịa ma. Ọ nwere ike na-enye a ahụmahụ pụrụ iche na niile shoppers, ọbụna ndị na-ike ime obi ụtọ. Ị nwere ike iru Antwerp ụgbọ okporo ígwè site Berlin, Paris, na obodo ndị ọzọ dị na Europe.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-cities-europe-shopping-train/ - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Inzọ Njem Italytali, Train Travel Portugal, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe